Kabtanka kooxda Liverpool Henderson oo cadeeyay waxyaabo ay isaga mid yihiin Salah iyo Suarez – Gool FM
Kabtanka kooxda Liverpool Henderson oo cadeeyay waxyaabo ay isaga mid yihiin Salah iyo Suarez
Dajiye January 17, 2019
(Liverpool) 17 Jan 2019. Waxay u muuqataa inay jirto waxyaabo ay isaga mid yihiin xidigaha Mohamed Salah iyo Luis Suarez, kuwaasoo lagu qiimeeyo gooldhaliyaasha ugu wanaagsan taariikhda xidigaha soo maray kooxda Liverpool.
Lakiin sidoo kale waxay labadan xidig heystaan tayada ay ku tartami karaan maalinba maalinta ka dambeysa.
Hadaba kabtanka kooxda Liverpool ee Jordan Henderson ayaa wuxuu tilmaamay waxyaabo badan ay isaga mid yihiin xidigaha Mohamed Salah iyo Luis Suarez, marka ay tahay gudaha garoonka iyo banaankiisa.
Jordan Henderson ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Daily Express” ee dalka England wuxuu ku sheegay:
“Wax badan ayuu kala mid yahay Mohamad Salah xidiga Luis Suarez, wuxuu leeyahay maskax xoogan, sidaasi darteed wuxuu isku deyayaa inuu xooga saaro sida uu ku fiicnaan lahaa”.
“Dad badan ayaa ka soo horjeeda Mohamad Salah, mar walba uu cadeeyo awoodiisa, waxay cadeeneysaa inay qaldan yihiin”.
Yeelkadeed, Henderson ayaa xaqiijiyay in Mohammed Salah uu kala mid yahay Luis Suarez arin kale, taasoo ah wuxuu doonayaa inuu u dagaalamo sida uu ku dhalin lahaa goolal ama uu kaga caawin lahaa saaxiibadiis kooxda”.
Valverde oo ka hadlay go’aankiisa kaga aadan Messi kulanka caawa ay kula ciyaari doonaan Levante Copa del Rey
Ronaldo oo ka hadlay bar-tilmaameeka xiga ee kooxda Juventus kadib markii ay ku guuleysteen Italian Super Cup